Imboni yethu 2021
IGreenPlains, njengomunye wabakhiqizi bemikhiqizo yokunisela ekhethekile, ihola imboni ngekhwalithi ephezulu yomkhiqizo nedumela elihle emakethe yamazwe omhlaba. Sithuthuke ngokukhethekile kwethu: 1. Ithimba le-R & D Lobuchwepheshe, sinikezela ngenkonzo yokumisa okukodwa kusuka kumkhiqizo ...
I-oxygen encibilikisiwe namanzi eSunlit emanzini okunisela
I-oxygen yamangqamuzana encibilikiswe emanzini ibizwa ngokuthi yi-oxygen encibilikisiwe futhi imakwe njenge-D0. Inani lomoya-mpilo oncibilikisiwe emanzini angaphezulu ngu-5-10mg / L. Lapho kunemimoya enamandla namagagasi, umoya-mpilo oncibilikisiwe emanzini ungafinyelela ku-14mg / L. Ukugcwala kwe-oxygen ukuncibilika = oksijini oncibilikisiwe M ...
Izinga lamanzi lokunisela
Izinga lamanzi nezimpawu zalo kuthonya ukukhula kwesitshalo, ukwakheka kwenhlabathi kanye nohlelo lokunisela uqobo. Izinga lamanzi okunisela libhekisa ikakhulu ekwakhekeni kwawo ngokomzimba nangokwamakhemikhali, noma ngaphezulu ngemininingwane ekwakhiweni kwamaminerali emanzini nasekubusweni o ...
Sikhombise njengababonisi e-123rd Spring Canton Fair. Esizeni sombukiso, sithole izinkampani namakhasimende angaphezu kuka-30 avela eMiddle East, India, Egypt, Europe naseChina. Ezingxoxweni, imikhiqizo yenkampani izuze ukuthandwa ngamakhasimende ngentengo enhle kakhulu futhi ephezulu ...
Imboni yethu entsha yathuthwa ngoMeyi 2015, ehlanganisa indawo engama-20,000 ㎡. Lezi zakhiwo zifaka phakathi ukukhiqizwa, indawo yokugcina impahla, indawo yamahhovisi, nezindawo zokulala. Ifakwe imishini esezingeni eliphakeme kanye nokuphathwa okuqeqeshiwe, iGreenplains iyazethemba ukuhlangabezana nezinselelo eziphakeme, futhi yakhe ikusasa elingcono.